Maxaa Bentley u Bixiyey In La Soo Dhaweeyo - Geofumadas
Oktoobar, 2010 tabo cusub, Microstation-Bentley
Dhowr cisho ka dib safar dheer oo u socdaalay London ilaa Amsterdam, ka dibna aynu eegno waxa laga yaabo in ay naga yaabiyaan dadka deenishka ah ee ku soo biiraya finalka.
Natiijada kama dambeysta ah ee mawduuca ku saabsan mawduuca geospatial iyo dawladda
GeoSite, shirkad deenish ah ayaa soo bandhigaysa qiiq ayadoo adeegsanaysa xiriirka mobile, iyada oo loo marayo adeega shabakadda oo ka dhex muuqda labada dhinacba. Booska, waxaad qabsan kartaa xogta, sida sawirada iyo sifooyinka xfm, si ay u soo diraan iyaga oo isticmaalaya wireless si Microstation iyo halkan ka jawaab. Tan ugu fiican, taas oo ah arjiga habka dawladeed.
Waxay u soo bandhigayaan 19 11 am.
IT Developer, sidoo kale deenishku, waxay muujinayaan horumarka isticmaalka cadastoolka adigoo isticmaalaya jaangooyo Adeegga Muuqaalka Webka (WFS).
Tani waxay u muuqataa mid xiiso leh, iyada oo tixgelineysa in arrintan ay shaqeyneyso, waxay ku qasbanaan doonaan in ay xogta ku qoraan serverka Geospatial via idpr (rajo ahaan iyo aan ka ahayn Project Wise). Waxay noqon doontaa codsiyada koowaad ee xfm ka faa'iideysiga heerkan, haa waa habka sababtoo ah illaa hadda xfm wali waa wax gaar ah Bentley inkastoo ay jirtay dhowr sano oo jiritaan ah waxayna taageertaa heerka. Adeegga Khariidadda Webka ayaa loo arkay inay tahay mid aad u caan ah, in Isbanishka wanaagsani yahay inuu muujiyo khariidada sida muuqaal iyo ikhtiyaar dib u fiiri sifooyinka; laakiin WFS waxay tusineysaa in lakabka lafaguray lakulmayo miiska sifeynta hoosta OGC kaas oo aqoonsan kara barnaamijyada kale sida ArcGIS, gvSIG, iwm.
Labaduba waxay samayn doonaan bandhig nus-saac ah 19 ee Oktoobar inta u dhaxaysa 11 iyo 12 ee badhkii. Waxaan u maleynayaa in Ingiriiskiisu uu u dhawaaqi doono Jarmal badan, sida buuga Asterix ee Jarmalka. Tvilum Landinspektørfirma.
Dhammeeyaha kale ayaa sidoo kale ah deenish, oo ku tartamaya qaabka 3D ee duulimaadka. Waxay u muuqataa in aysan yeelan doonin bandhig, laakiin waxay hubaal ka qayb qaadan doonaan miiska shaxda.
Fikradayda, WFS waxay qaadataa abaalmarinta.
Dalalka finalka ah
Deegaanka Latin America, kaliya Venezuela iyo Brazil, labadaba beeraha dhirta tamarta; Wadajirta Mareykanka, waxay ku daraan 11 qaaradda Ameerika. Inta kale, 21 waxay ka yimaadeen Yurub, 14 Asians, 2 Africans iyo 1 oo ka yimid Oceania sida ku cad miiska soo socda.
Boqortooyada Ingiriiska (8)
Emirates United Arab Emirates (2)
Shirkadaha finalka ah
Hada waxaan hadda ka hadli doonaa qaybaha iyo shirkadaha la magacaabay. Wax badan oo ku saabsan ujeedooyinka mudnaanta leh ... iyo gaadiidka.
Isgaarsiinta Sawir ahaan
AAPROG dhismaha bvba
Kooxaha isku xidhaya
Innovation ee Bridges
Dib-u-habeynta Xarumaha, Madaalada, iyo Qalabka Milatari
Adeegyada Cuntooyinka BV
Cusbooneysiinta Shabakadaha Isgaadhsiinta
Adeegyada Qandaraaska Qandaraaska, Inc.
Telefoonka O2 Czech Republic
Wasaaradda Gaadiidka ee Gobolka New York
Cusbooneysiinta Qorshaha Guud
Innovation in Geotechnical iyo Geoqeynta Deegaanka
Orion Engineering Engineering
Machadka Geological-ka Gobolka Dionyz Stur
Cusbooneysiinta Metals iyo Mining
La taliyeyaasha PDC
ECIDI - Saldhigga Tamarta Kaydinta
ESI Inc. ee Tennessee
Cusbooneysiinta Hantida Wax-soo-saarka
Royal Iskoning Engineering Engineering
Cusbooneysiinta Tareenka iyo Gaadiidka
AECOM - Mashruuca Dib-u-dhiska ee Neasden
Aurecon - SH18 Devisonville Deviation
Mawduuca Kumbuyuutarka ee Muusikada ah
Cusbooneysiinta ku jirta Gudbinta Isku-daadinta iyo Nidaamyada Qaybinta
Machadka Qorshaha Korantada Korantada Koonfureed ee Bartamaha China
Naqshadeynta Nuklearka Nuklearka Qorshaha Awoodda Nuclear State
Cusbooneysiinta Biyaha iyo Daaweynta Daaweynta Wastewater
Cusbooneysiinta Biyaha, Biyaha, iyo Nidaamka Duufaanta
Arizona Biyaha American iyo Narasimhan Consulting Services, Inc.
Post Previous«Previous Juquraafi ahaan sawiro ku dhow
Post Next Daabacaadda duubista internetkaNext »